Hoos u dhaca dollarka mareykanka iyo welwelka aduunweynaha
Waxaa in muddo ahba aad iyo aad hoos ugu dhacaayey qiimaha dollarka mareykanka. Iyadoo weliba la saadaaliyey inuu hoos u dhacaasi sii socon doono.Arintaas oo aad wewel ugu abuurtay aduunweynaha badankiis, gaar ahaan wadamada horey u maray. Haddaba waxaan maqaalkan gaaban kaga hadli doonaa arimaha ugu muhiimsan ee keenay hoos u dhaca dollarka iyo siyaabaha uu saameyn ugu yeelan karo wadamada kale. Arimo dhowr ah ayaa oo isku xiran ayaa keenay in sarifka dollarku uu aad hoos ugu dhaco.
Miisaanka dhaqaalaha Mareykanka
Si waddan dhaqaalahiisu uu hab hufan ugu shaqeeyo waa in ay ugu yaraan is leég yihiin dakhliga wadanka soo gala iyo kharashka ka baxa. Basle waxaa aad iyo aad u wanaagsan in dakhligu badan yahay si dhaqaalaha wadanku uu si caafimaad qabta ugu shaqeeyo.Haddaba intii uu madaxtinimada mareykanka qabtay George Bush waxaa cirka isku shareeray kharashkii dowlada mareykanka. Kharashkaas oo aad iyo aad uga batay dakhligii dowlada soo gelayey, kaasoo iminka gaaraya ilaa 427 billion oo dollar. Taas oo u dhiganta ilaa boqolkiiba afar ( 4%) dhakhliga wadanka soo gala.
Umuurtani waxaa ay keentay in kalsoonidii lagu qabey lacagta dollarka ah ay aad u yaraato. Xitaa waxaa meesha soo galay welwel ka yimid dhinaca maalgeliyayaasha, kasoo ah ineyba shaki ka qabaan helitaanka lacagtooda haddii ay mareykanka gashadaan. Maxaa yeelay dhaqaalaha mareykanka maanta waa mid ku saleysan xagga deynta oo aan isagu isbixin karin.Sida sharciga guud ee dhaqaaluhu yahay, haddii rabitaanka shey uu yaraado waxaa hoos u dhaca qiimihiisa. Dollarkana maanta taas oo kale ayaa haysata. Inkastoo ay dowladu balan qaaday iney isu miisaami doonto dhakhliga iyo kharashka wadanka, haddana waa mid aad u adag iney suurto gasho wakhtiga dhow.
Ganacsiga dibada oo aan miisaaneyn:
Waxaa iyana xaalada dollarka sii fogeysey, Iyadoo aaney isu miisaaneyn waxyaalaha uu mareykanku u iibgeeyo dibada iyo waxyaalaha uu soo iibsado. Iyadoo wakhtigan xaadirka ah ay aad iyo aad u badan tahay waxyaalaha uu dibada ka soo iibsado.
Labdaas arimood ee aan kor kusoo sheegnay ayaa saldhig u ah, hoos u dhaca weyn ee ku yimid dollarka. Wadamo badan oo xiriir ganacsi la leh mareykanka amaba ay hanti kaga jirto lacagta dollarka ayaa aad ugu welwelsan halka uu ku dameyn doono dollarku. Tusaale ahaan wadamada jaban iyo shiinaha ayaa ku hanjabey iney iibin doonaan hantidooda xagga dollarka ah si ay lacagtooda ugala baxaan. Maxaa yeelay waxaa ay ka baqayaan inuu hoos udhac ku yimaado hantidaas. Sidoo kale waxaa iyaguna welwel weyni soo foodsaaray wadamada yurub, kuwaas oo ka baqaya in shirkadadhoodu la tartami waayaan kuwa mareykanka. Sabatuna waxaa weeyaan iyadoo alaabta mareykanku ay raqiis ka noqon doonto aduunka madaama uu dollarku jaban yahay hadda. Waxaa kaloo ay ka welwel qabaan in dhaqaalaha wadamadooda oo aad ugu xiran mareykanka uu saameyn ku yeesho doolarka qiimihiisu dhacay.
Taas waxaa kuu cadeyn kara iyadoo uu maalin dhoweyd wasiirka maaliyada ee jarmalka oo lagu magacaabo Hans Eichel caddeeyey inuu wadankiisu aad iyo aad uga walaacsan yahay hoos u dhaca ku yimid lacagta dollarka .
Si kastaba ha ahaatee, hoos u dhaca dollarku dadka oo dhan dhibaato uma wada aha. Waxaa jira shirkado iyo shakhsiyaad badan oo ay faaíido u tahay inuu dollarku raqiis noqdo. Dadka ay faaìidadu ugu jirto waxaa ka mid ah kuwa doonaaya in ay u safraan wadanka mareykanka. Waxaa kaloo iyana faaìidaya dadka si joogto ah u iibsada alaabada mareykanka. Kolkaan eegno dhinaca soomaalida, gaar ahaan soomaalida qurbaha ku nool oo ah isha ugu weyn ee ay wadankeenii soomaaliya ay wax ka soo galaan. Hoos u dhaca dollarku faaíido weyn ayuu inoo leeyahay, maxaa yeelay waxaan iibsanaa dollar kolkii aan lacag xawileyno. Haddaba hadii dollarku raqiis yahay, waxaa kuu baaqaneysa waxoogaa lacag ah.